၂၀၁၈ မှာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Personal Branding ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ? – Sunthit Myanmar
၂၀၁၈ မှာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Personal Branding ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ?
စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ့်ဆိုရင် သင့်ကို Personal Branding က လူသိများစေပြီး အရောင်းများကို တတ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို Personal Branding ကို ဘယ်လိုစတင်တည်ဆောက်မလဲ။
ဦးစွာ သင့်လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်ကို အရင်သတ်မှတ်ပါ။ လူအများသင့်ကို မှတ်မိလွယ်စေမယ့် ပုံမျိုးဖြစ်စေရန် ဖန်တီးရပါမယ်။ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုဟန်များလည်း ထင်ဟပ်နေရန်အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
ထိုအပြင် အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် လူသိများလာအောင် မိတ်ဖွဲ့ပါ။ ၎င်းတို့ကို အပြင်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။ အဆင်ပြေပြီး လူသိများလာပါက website တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းအကြောင်း အချက်အလက်များကို အမြဲထောက်ပံ့ပေးပါ။ သင့်ဖောက်သည်များကို အမြဲတမ်း ပေးရသော တန်ဖိုးနှင့် ထပ်တူညီသော အရာများ ပြန်လည်ပေးစွမ်းနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
သင့်လုပ်ငန်းနှင့် အဆက်အသွယ်မပျက်စေရန် အမြဲ သတင်းများကို အသစ်များတင်ပေးနေပါ။ သို့သော် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ မူရင်းဟန်ပုံမပျက်ရန် အသစ်များကို ဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းပေါ်တွင်သာ အာရုံစိုက်ပြီး အဆက်အသွယ်ကောင်းများကို အမြဲရှာဖွေနေရပါမယ်။ မစတင်ခင် အမြဲပြင်ဆင်ပြီးမှ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ သို့သော် လုံးဝ စင်းလုံးချောအဆင်ပြေတဲ့အထိ အချိန်ကုန်ခံပြင်ဆင်ရမည်ကို မဆိုလိုပါ။ ဖြေးဖြေးနှင့်မှန်မှန်ပင် မှားသည့်အမှားများမှ သင်ယူကာ အောင်မြင်မှုဆီသို့ သွားရမည်ဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် လူတိုင်း လုပ်ငန်းကို Personal Branding လုပ်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းပါတယ်။ အောင်မြင်လိုပါက သင်ဘာကို ရည်မှန်းထားသလဲဆိုတာကို အရင်သတ်မှတ်ပါ။ ပြီးမှ ထိုသို့ရောက်ရန် နည်းလမ်းများကို ကြံဆပြီး လုပ်ဆောင်သွားရမည်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
Published December 10, 2017 By sanlenaing
Categorized as How To Tagged ၂၀၁၈ မွာ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ Personal Branding ဘယ္လို တည္ေဆာက္မလဲ?
ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွတွေနဲ့ အစ္စရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရာ လူ ၂ဦးသေဆုံး ၊၇၀၀ကျော်ဒဏ်ရာရ